Salav Steam Mop SM-550 | Buy online | SHOP.COM.MM
Salav Steam Mop SM-550
Pump steam mop
Chemical-free hygienic cleaning
Kills bacteria, dust mites and other allergen
Comes withasuper long5meter cord
ဒီရေနွေးငွေ့ကြမ်းတိုက်စက်ကလေးက ပိုးမွှားတွေကို သေစေလို့ အရမ်းကို သဘောကျပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်း ရေနွေးပူလို့ အချိန်ကုန်လည်း သက်သာပါတယ်။ Read more Hide
ကျွန်တော်ကအိမ်မှာတစ်ယောက်တည်းနေရတာတော့ သန့်ရှင်းရေးလည်းသိပ်မလုပ်နိုင်ဘူး တစ်နေကုန်ရုံးမှာပဲဆိုတော့။ အဲ့တော့ အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းသက်သာစေတဲ့ Steam Mop ကိုဝယ်မိတယ် အသိတစ်ယောက်အကြံပေးလို့။ ကြမ်းတိုက်တာလည်း ပိုမြန်သွားတယ်။ ခါးကုန်းပြီးလှည်းစရာမလိုတော့ ခါးညောင်းလည်းသက်သာတယ်။ Read more Hide
SALAV SM550 comes withasuper long5meter cord so you can clean an entire room without the need to unplug and plug, it even features an ON/OFF foot switch so you don't breakasweat, cleaning the kitchen floors, bathroom floors, living room and family room floors, bedrooms, bathrooms, everywhere, clean, sanitized and germ-free. Especially necessary for homes with growing families where babies spend most of their time crawling, lying, and playing on the floor. From now on, save on expensive floor and carpet steaming bills.
Refillable water tank during steaming
Steam Mop SM-550 + (Free gift - Worth of 14300 Ks)
Specifications of Steam Mop SM-550